Canonical inotsigira Blender kusvika pamusika wekambani | Linux Vakapindwa muropa
Canonical inotsigira Blender kusvika pamusika wekambani
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Noticias, Free Software, Linux software
Blender es imwe yemahara uye yakavhurwa sosi mapurojekiti anokwanisa kukwikwidza nekurova dzimwe nzira dzekutengesa. Icho chiri pamusoro 3D yakasikwa suite yevanyori uye nyanzvi dzekugadzira midhiya. Canonical ndiyo kambani iyo, nekuda kwekuparadzirwa kweLinux Ubuntu, yakakwanisa kuwana nzvimbo mumusika wemakambani nekupa rutsigiro rwebhizinesi rehunyanzvi uye kuchengetedza kwenguva refu kwekuchengetedza mhinduro dzinobva pane yakavhurwa sosi software.
Vagadziri veBlender vakabatana neCanonical yekupa dhizaini dhizaini uye ma studio ekugadzirisa zvinoenderana neLTS vhezheni yesutu.
Mark Shuttlewort, CEO weCanonical, akati:
Iropafadzo kutsigira Blender uye rinonakidza basa renharaunda ino inoshamisa, ivo vavambi nevatungamiriri. Chiziviso chanhasi chinopa simba Blender neCanonical rutsigiro iyo inosanganisira sevhisi izere uye yekugara-kwenguva chengetedzo chengetedzo, uye inopa iyo nhanho yekuchengeteka iyo nyanzvi Blender zvemukati vagadziri vanoda.
Kubva kuBlender Foundation, uyo akataura aive mutungamiri waro, Ton Roosendaal:
Maitiro Canonical akaronga sevhisi iyi pamwe nesu muenzaniso kune rakavhurika sosi kufamba. Ini ndinofunga ichaisa mwero mutsva wekuti yakazvimiririra sei, emahara mapoka evagadziri vane hanya chaizvo nezve zvigadzirwa zvavo nevashandisi vanotora chikamu mumusika uye kuumba ramangwana reindasitiri.
1 Canonical inotsigira Blender. Mitengo uye Zvimiro
1.1 Tsigiro yakajairwa ($ 500 pagore)
1.2 Yepamberi rutsigiro ($ 1000 pagore)
Canonical inotsigira Blender. Mitengo uye Zvimiro
Chipo chekutsigira chinosanganisira Blender LTS shanduro paLinux, Microsoft Windows uye macOS kugoverwa. Canonical mainjiniya achashanda zvakananga nevatengi kuti vape yakazara yehunyanzvi rutsigiro kune vashandisi nekumisikidza, kuongorora uye kugadzirisa matambudziko nekukurumidza sezvazvinogona. Canonical ichagadzirisa hurongwa hwese hwekutsigira, kusanganisira kusangana pamwe neBlender rutsigiro zvigadzirwa.
Maitiro akasiyana ekutsigira ndeaya:
Tsigiro yakajairwa ($ 500 pagore)
Tsigiro netiketi kana foni mumazuva ebhizinesi
Kutanga kupindura kune rakakomba dambudziko mukati menguva isingasvike maawa mana ebhizinesi.
Chechipiri kupindura mukati menguva isingasviki maawa masere ebhizinesi.
Mhinduro yechitatu mukati menguva isingasvike gumi nemaviri maawa ebhizinesi.
Mhinduro yechina mukati menguva isingasviki kwezuva rimwe bhizinesi.
Yepamberi rutsigiro ($ 1000 pagore)
Tsigiro nefoni kana tikiti maawa makumi maviri nemasere, mazuva manomwe.
Kutanga kupindura kune rakakomba dambudziko mukati menguva isingasviki 1 awa.
Chechipiri kupindura mukati menguva isingasvike maawa maviri.
Mhinduro yechitatu mukati menguva isingasvike maawa matanhatu.
Mhinduro yechina mukati menguva isingasvike maawa gumi nemaviri.
Canonical ichavaka nekuchengetedza yayo pachezvayo sevhisi yeBlender, zvichibva pane yatove Ubuntu Advanced chikuva. Mari inowanikwa kubva kumasevhisi ichagovaniswa zvishoma nenheyo iyo inozoisa mari mukuvandudzwa kwekutanga kweBlender uye nerutsigiro rweveruzhinji rwevatsigiro yakawedzerwa. Iyo purojekiti haizove nezvibvumirano zvebvumirano nevatengi vanobvumirana neCanonical.
Iyo Blender Foundation ine chivimbo chekuti kudyidzana neCanonical kuchabatsira iyo kuzadzisa yakataurwa basa mu2020.
Kuisa hunyanzvi hwepasirese hwe 3D mumawoko evatambi semahara / akavhurika sosi software, uye nekuita zvinoshamisa nazvo.
Ngativimbei kuti nenzira iyi Blender inogona kugadzirisa rimwe rematambudziko akakomba anokanganisa akasiyana akazvimiririra emahara software mapurojekiti.
Kunyangwe Blender iine kuita kwakaenzana kana zvirinani pane dzimwe nzira dzekudyara, kushomeka kwekutengesera kwekutsigira kwakazvitadzisa kuwedzera kuwedzera mushandisi mushandisi base.. Iko kuwanikwa kwerutsigiro ndechimwe chezvinhu zvinoitwa nemakambani pakusarudza chigadzirwa.
Ichowo chakanakisa bhizinesi imwe nzira yeCanonical. Kunyangwe yakabudirira mumabasa emakambani, kunyanya mumasevhisi egore, uyu musika uko Red Hat ine hutungamiriri hwakajeka. Kune rimwe divi, kupa rutsigiro rwekutengesa kune emahara software mapurojekiti ibasa idzva chose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Canonical inotsigira Blender kusvika pamusika wekambani
Network Security Toolkit 34 Inouya Kubva paFedora 34, Linux 5.12, Support Enhancements, uye Zvimwe
Cloudflare chiziviso WARP yeLinux uye proxy mode